လမ်းအိုလေး | beyond chaOs | Page 2
ဟိန်းမြတ်ဇော်၊ ၂၄ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၈။
(ကဗျာမဂ္ဂဇင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈။ နှစ်ကာလများ။)
Categories: Kabyarz | Tags: ဟိန်းမြတ်ဇော်, Hein Myat Zaw, Kabyarz | Permalink.
ကြယ်စင်များ အထင်အရှား ရှိခဲ့ပါသည်။
Fairy Tale (Fires at Midnight by Blackmore’s Night) (ဏေသစ်)
နောက်ဆုံးတော့ အချိန် ကျ ပြီ
မေးခွန်းကို ဖြေမယ့် အစား
ကြည့်မှန်ဟာ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာကွဲသွားပြီး
Categories: Kabyarz | Tags: ဏေသစ်, Kabyarz, Nnay Thit, song poems | Permalink.
We Are by Hollywood Undead (ဏေသစ်)
တစ်​ခုခုကို ​ပြောမလိုလုပ်​ပြီးမှ ဘာမှမ​ပြောဘဲ လှည့်​ထွက်​သွားတဲ့ အမူအရာမျိုးကို ငါတို့ ကျွမ်းကျင်​ခဲ့ရပါပြီ။ ဘယ်​သူရှိဦးမှာလဲ … ငါတို့ပဲ​လေ … ငါတို့​ပေါ့။ ငါတို့ရဲ့ မမီလိုက်​တဲ့ ရထား​တွေမှာ ငါတို့မသိလိုက်​တဲ့ ငါတို့ရဲ့ တစိတ်​တပိုင်း​တွေဟာ ပါသွားနှင့်​ပြီလို့ အချိန်​ပြည့်​ခံစား​နေရတာဟာ အချိန်​ပြည့်​။ အချိန်​ပိုင်းအ​နေနဲ့၊ ထိခိုက်​နစ်​နာစရာ ဇာတ်​ရုပ်​​တွေမှာ ငါတို့လူစားဝင်​ သရုပ်​​ဆောင်​တယ်​။ အချိန်​ပြည့်​အ​နေနဲ့ အဲဒီအချိန်​ပိုင်း​တွေကို ခဏခဏ ငါတို့ ပြန်​ကြည့်​တယ်​။ အားလပ်​ချိန်​​ပျော်​ရွှင်​မှုအ​နေနဲ့ တပ်​ဆင်​ထားခြင်း မရှိ​သေးတဲ့ ဖုန်း​တွေကို ငါတို့ ဆက်​ကြတယ်​။ အဲဒီမှာ စိတ်​သက်​သာရာ တစ်​ခုခု ရှိတယ်​လို့ ယုံကြည်​ကြည့်​လို့ ရ​နေသားပဲ​။ ပြီး​တော့ အ​ရေးအကြီးဆုံး တစ်​ခုအ​နေနဲ့ “ငါတို့” လို့ ​ပြော​ပြော​နေ​ပေမယ့်​ “ငါ” လို့ပဲ အဓိပ္ပာယ်​ရတယ်​ဆိုတာ ငါတို့ သိ​နေကြတယ်​။ ။
သီချင်းကဗျာများ – ၂၀၁၄ ခုနှစ် စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက်ကထုတ်တဲ့ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာများ ၆၀း၁၅း၀၃ မှာ ပါတဲ့ ကဗျာဆရာ မောင်ဒေးရဲ့ ရုပ်ရှင်ကဗျာများ ကိုဖတ်ပြီး အားကျ။ သီချင်းတွေနဲ့ လိုက်ရေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်း။ – ဏေသစ်
အပျံသင်​ချိန်​​မှာ ဆိုရမယ့်​ သီချင်းလို့
ဘဝကို ရိုးစင်း​စေခိုင်းထားတဲ့ ရူးသွပ်​မှု
အချိန်​ကျတဲ့အခါ မင်းဘဝကို မင်း​မေ့သွားမှာ
ဆိုတဲ့ Fortune Cookie လာ စာသား﻿တွေ
မရှိ။ သူ့ ပကတိ အရှိ အဓိပ္ပာယ်​သက်​သက်​ကို
ကျမ်းစာပိုဒ်​​တွေ၊ သစ်​သီး​တွေ၊ အမှန်​တကယ်​​တွေ … ။ ။
Categories: Kabyarz | Tags: ဏေသစ်, Kabyarz, Nnay Thit | Permalink.